I-China Intengo Engcono Kakhulu ye-SG(B)10 Series Distribution Transformers Abakhiqizi nabahlinzeki be-Wholesale-Shengte |Shengte
Intengo Engcono Kakhulu ye-SG(B)10 Series Distribution Transformers Wholesale-Shengte
Ngaphezu kwazo zonke izinzuzo zazo zonke iziguquli zohlobo olomile e-China, i-transformer nayo inezici ezilandelayo:
I-insulation: Ibanga lokufakwa kwe-insulation ngu-H (180 C) futhi ukuphindaphindeka komklamo kukhulu.
Ukuphepha: I-SG (B) i-10 series-former-type transformer idizayinelwe njengebanga le-H-class insulation, kuyilapho impahla eyinhloko yokufaka i-DuPont NOMEX iphepha lase-United States eline-C-class (ukumelana nokushisa kungafinyelela ku-220 C).I-transformer ngeke ikwazi ukumelana nelangabi, ibambezele amalangabi futhi ngeke iqhume ukuze ikhiphe amagesi anobuthi.
Ivumelana nemvelo: I-Transformer core iyishidi lensimbi eligoqiwe elibandayo le-silicon eline-conductivity kazibuthe ephezulu kanye nekhwalithi ephezulu.Ngomklamo okhethekile we-Dell, umsindo wokusebenza ungaphansi kakhulu kwezinga likazwelonke.Ingatholakala ngemva kokusebenza ngokugcwele futhi ayingcolisi imvelo.
Ukuvikela umswakama: Ngenxa ye-NOMEX insulated transformer eminyene, ingasebenza ngendlela egculisayo endaweni enomswakama kakhulu.Lapho ikhoyili iphathwa iyonke, izinga lokuvala lekhoyili namandla omshini wekhoyili ayaqiniswa futhi ngopende wokucwilisa we-vacuum pressure izikhathi eziningi.Ngesikhathi esifanayo, ukumelana ne-antisepsis nomswakama we-transformer kuyathuthukiswa.
Ukuqina: Ukufakwa kwe-Class H kungamelana nokushisa okusebenzayo kwe-180 C. Inokumelana nokushisa okuhle, amandla aphezulu emishini, izimo ezinhle zokushisa ukushisa, umthamo oqinile wokulayisha ngokweqile, ukuphila okushisayo okude, okungathinteki ukunwetshwa nokunciphisa okushisayo, ukuqina okuhle nokunwebeka, ungalokothi uqhekeke.
Umnotho: Ngenxa yokumelana nokushisa okuphezulu kwesistimu yokufakelwa, indawo yokupholisa ye-transformer ingancishiswa.Uma kuqhathaniswa ne-transformer enezinga elifanayo lokufakelwa, isakhiwo singaklanywa sibe yinkimbinkimbi futhi isisindo singancishiswa ngokuqhathaniswa.Uma kuqhathaniswa ne-transformer yohlobo lwe-09, isilinganiso sokulahlekelwa kwesisindo sohlobo lwe-10 sincishiswa ngo-15% futhi izindleko zokusebenza ziyancipha kakhulu.
Amapharamitha wobuchwepheshe we-SC(B)10 isiguquli sohlobo olomile
Umthamo olinganiselwe (KVA) ukulahlekelwa Akukho ukulayisha okwamanje (%) I-impedance yesekethe emfushane (%) Izinga lomsindo DB (A) Ubukhulu bereferensi yephrofayela (mm) Isisindo somzimba (kg) Isikali (mm)
Awukho umthwalo SG10 Umthwalo 145 C L x W x H ngaphandle kwegobolondo L x W x H enekesi
Okwedlule: i-transformer efakwe uwoyela
Olandelayo: Umphakeli we-OEM we-10KV Class S11 Series On-Load Voltage-Regulated Distribution Transformers-shengte
Umphakeli we-OEM we-10KV Class S11 Series On-load ...